Mobile App တစ်ခုကို အဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်နည်း • POINT
ဒီနေ့မှာတော့ Point ပရိသတ်ကြီးအတွက် Mobile App တစ်ခုကို အောင်မြင်အောင် အဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်ဘာကြောင့် Mobile Application တွေ လိုအပ်တာပါလဲ။ သင်က အခြားစွန့်ဦးတီထွင်သူတွေအရွေ့ကို နောက်လိုက်လိုသူလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင် ပြသနာတွေကို ကြိုတင်ဖြေရှင်းလိုသူလား? ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေက သင်ဖန်တီးမယ့် Mobile App ဟာ အောင်မြင်နိုင်ခြေရှိ၊ မရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ Mobile App တွေ ပြုလုပ်ဖို့ (၃)နှစ်ကျော် အလုပ်လုပ်ဖူးပြီး တော့ ဈေးကွက်ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိခဲ့တာတွေထဲက အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ App တစ်ခု ဖန်တီးဖို့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အရေးကြီးအလိုအပ်ဆုံး အချက်ကတော့ App တစ်ခုကို စတင်လုပ်ကိုင်ဖို့ပါပဲ။
App တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ သင်တီထွင်လိုတဲ့ အတွေးသစ် ဒါမှမဟုတ် တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ပြသနာတစ်ခုကို ရှာဖွေပါ။ သင့်မှာApp နဲ့ ပတ်သက်ပြီးအတွေးသစ်တွေရှိနေရင်တော့ ဒုတိယအဆင့်ကို စတင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒိလိုမရှိသေးရင်တော့ ဆက်လက်ရှာဖွေပါ။ အတွေးအမြင်သစ်တစ်ခုမရှိဘဲ App တစ်ခုတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လူအများလိုအပ်နေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် သူတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ပြသနာတွေကို ရှာဖွေပါ။ နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသနာတွေက နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေက ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးမယဉ်ဖူးတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ လူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးတတ်ကြပါတယ်။ ယခုသင်အသုံးပြုနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးဟာ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ဖန်တီးခဲ့တာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြသနာတွေကို တစ်ခုချင်းစီမှတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိလိုမှတ်သားထားပြီးရင် သင့်ရဲ့ပြသနာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ စတင်တွေးတောပါ။ ပြသနာတွေဖြေရှင်းဖို့ တွေးတောနေခြင်းက စဉ်းစားဉာဏ်ကို ပိုပြီးကောင်းမွန်စေပါတယ်။
လူကြိုက်များမယ့်၊ လူတွေအတွက် တကယ်အကျိုးပြုမယ့် App တစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက် သင်ရေးဆွဲချင်တဲ့ Appက လူတွေလိုအပ်နေတဲ့App ဟုတ်၊မဟုတ်ကို Google Keyword Planner အသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
App ကို စတင်ဖန်တီးချိန်မှာ သင်ဖန်တီးလိုတဲ့စိတ်ကူးတွေ၊ ဖန်တီးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စာရွက်ပေါ်မှာ တတ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်ရေးသားထားပါ။ အဲ့ဒိလိုအသေးစိတ်ရေးသားခြင်းက သင့်ရဲ့ App ရေးဆွဲမယ့်သူကို သင်ဖန်တီးလိုတဲ့ App ဖြစ်အောင် ရေးဆွဲပေးဖို့ လွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။
သင့် App သင်App တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုလျှင်အဓိကျတဲ့ အရာတစ်ခု ကိုဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်။ အမြင့်ဆုံး အကောင်းဆုံး Versionကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ပြောင်းလဲ မတည်ဆောက်နိုင်သေးရင်တောင် သင့်ရဲ့ App ကို အမြဲတမ်း Update လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ သင့်ရဲ့ တိုးတက်မှုကိုမကျဆင်းဖို့ ကူညီပေးသလို ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ဖို့ကိုလည်း ကူညီပေးမှာပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ပြောပြချက်အရ သူတို့ဟာ အခြေခံကျတဲ့ ဒီဇိုင်းနှင့် မိမိ၏ App ကို လူသိများစေဖို့ပဲ ဦးစားပေးပါတယ်။ ဒီဇိုင်းမပါတဲ့ App ဟာ မသုံးဖူးသူတွေအတွက် အခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ Vinod Khosla Ventures က ဒီဇိုင်းဆိုတာ Technology အသုံးပြုရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တီထွင်သူတွေဟာ ဒီဇိုင်းကိုပထမဆုံး စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ App အတွက် Designer ငှားလိုလျှင် ပထမဆုံးအနေနဲ့ သူ့ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်နဲ့ အကောင်းဆုံး Desing ရေးဆွဲနိုင်သူကိုပဲ ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ App တွေ အများယုံကြည်လက်ခံမှုတွေကို Online မှလေ့လာစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ် သူတို့ဖန်တီးထားသော App တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်မှပဲ သူတို့ကို သင့်ရဲ့ Product အတွက်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
App တည်ဆောက်သူရဲ့ Account ကိုသက်ဆိုင်ရာ App Store မှာ သင်ရဲ့ App ကိုရောင်းချဖို့၊ Register လုပ်ရပါမယ်။တစ်နှစ်မှာ Google’s Android $25 နဲ့ Apple app store အတွက် နှစ်စဉ် $99ပေးဆောင်ရပါတယ်။ သင့်မှာ Formed ရှိပြီဆိုရင် Register လုပ်ဖို့ ကိုယ်ပိုင် (သို့မဟုတ်) Company အနေနဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ App ကို Downloads လုပ်ဖို့အတွက် အချက်အလက်တွေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးထားပြီး အသုံးပြုသူတွေကို ပိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ Free နှင့် Paid Version နှစ်မျိုးလုံးပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့App ရဲ့ အဓိကကျပြီး အများနဲ့ မတူ၊ ထူးခြားတဲ့အချက်တွေကို သုံးစွဲသူတွေ အလွယ်တကူ သိအောင် ဖော်ပြပေးထားသင့်ပါတယ်။ ပထမVersion မှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချက်အလက်များကျန်ရှိနေလျှင် နောက်Update Version မှာဖြည့်စွက်ပေးသင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ App အသုံးပြုနေသူရဲ့ Feedback တွေကို ပြန်လည်ကြည့်ခြင်းက သင်ပြန်ပြင်ဆင်သင့်တဲ့အချက်တွေနဲ့ လူအသုံးများအောင် ထည့်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို သိစေနိုင်တဲ့အတွက် သုံးစွဲသူတွေရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာအရေးပါလွန်းသောအချက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။သင် App တစ်ခုတည်ဆောက်လိုလျှင် ဒီအချက်အလက်တွေဟာ Customerနှင့် သင့် ကြားက စိန်ခေါ်မှုတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ Point ပရိသတ်ကြီးအတွက် Mobile App တစ်ခုကို အောင်မြင်အောင် အဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်ဘာကြောင့် Mobile Application တွေ လိုအပ်တာပါလဲ။ သင်က အခြားစွန့်ဦးတီထွင်သူတွေအရွေ့ကို နောက်လိုက်လိုသူလား။
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင် ပြသနာတွေကို ကြိုတင်ဖြေရှင်းလိုသူလား? ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေက သင်ဖန်တီးမယ့် Mobile App ဟာ အောင်မြင်နိုင်ခြေရှိ၊ မရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ Mobile App တွေ ပြုလုပ်ဖို့ (၃)နှစ်ကျော် အလုပ်လုပ်ဖူးပြီး တော့ ဈေးကွက်ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်သိခဲ့တာတွေထဲက အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ App တစ်ခု ဖန်တီးဖို့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အရေးကြီးအလိုအပ်ဆုံး အချက်ကတော့ App တစ်ခုကို စတင်လုပ်ကိုင်ဖို့ပါပဲ။
App တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ သင်တီထွင်လိုတဲ့ အတွေးသစ် ဒါမှမဟုတ် တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ပြသနာတစ်ခုကို ရှာဖွေပါ။ သင့်မှာApp နဲ့ ပတ်သက်ပြီးအတွေးသစ်တွေရှိနေရင်တော့ ဒုတိယအဆင့်ကို စတင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒိလိုမရှိသေးရင်တော့ ဆက်လက်ရှာဖွေပါ။
အတွေးအမြင်သစ်တစ်ခုမရှိဘဲ App တစ်ခုတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လူအများလိုအပ်နေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် သူတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ပြသနာတွေကို ရှာဖွေပါ။ နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသနာတွေက နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေက ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးမယဉ်ဖူးတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ လူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးတတ်ကြပါတယ်။
ယခုသင်အသုံးပြုနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးဟာ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ဖန်တီးခဲ့တာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြသနာတွေကို တစ်ခုချင်းစီမှတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိလိုမှတ်သားထားပြီးရင် သင့်ရဲ့ပြသနာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ စတင်တွေးတောပါ။ ပြသနာတွေဖြေရှင်းဖို့ တွေးတောနေခြင်းက စဉ်းစားဉာဏ်ကို ပိုပြီးကောင်းမွန်စေပါတယ်။
လူကြိုက်များမယ့်၊ လူတွေအတွက် တကယ်အကျိုးပြုမယ့် App တစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက် သင်ရေးဆွဲချင်တဲ့ Appက လူတွေလိုအပ်နေတဲ့App ဟုတ်၊မဟုတ်ကို Google Keyword Planner အသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
App ကို စတင်ဖန်တီးချိန်မှာ သင်ဖန်တီးလိုတဲ့စိတ်ကူးတွေ၊ ဖန်တီးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စာရွက်ပေါ်မှာ တတ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်ရေးသားထားပါ။ အဲ့ဒိလိုအသေးစိတ်ရေးသားခြင်းက သင့်ရဲ့ App ရေးဆွဲမယ့်သူကို သင်ဖန်တီးလိုတဲ့ App ဖြစ်အောင် ရေးဆွဲပေးဖို့ လွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။
သင့် App သင်App တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုလျှင်အဓိကျတဲ့ အရာတစ်ခု ကိုဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်။ အမြင့်ဆုံး အကောင်းဆုံး Versionကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ပြောင်းလဲ မတည်ဆောက်နိုင်သေးရင်တောင် သင့်ရဲ့ App ကို အမြဲတမ်း Update လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ သင့်ရဲ့ တိုးတက်မှုကိုမကျဆင်းဖို့ ကူညီပေးသလို ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ဖို့ကိုလည်း ကူညီပေးမှာပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ပြောပြချက်အရ သူတို့ဟာ အခြေခံကျတဲ့ ဒီဇိုင်းနှင့် မိမိ၏ App ကို လူသိများစေဖို့ပဲ ဦးစားပေးပါတယ်။ ဒီဇိုင်းမပါတဲ့ App ဟာ မသုံးဖူးသူတွေအတွက် အခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ Vinod Khosla Ventures က ဒီဇိုင်းဆိုတာ Technology အသုံးပြုရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တီထွင်သူတွေဟာ ဒီဇိုင်းကိုပထမဆုံး စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ App အတွက် Designer ငှားလိုလျှင် ပထမဆုံးအနေနဲ့ သူ့ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်နဲ့ အကောင်းဆုံး Desing ရေးဆွဲနိုင်သူကိုပဲ ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ App တွေ အများယုံကြည်လက်ခံမှုတွေကို Online မှလေ့လာစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ် သူတို့ဖန်တီးထားသော App တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်မှပဲ သူတို့ကို သင့်ရဲ့ Product အတွက်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
STEP SEVENApp တည်ဆောက်သူရဲ့ Account ကိုသက်ဆိုင်ရာ App Store မှာ သင်ရဲ့ App ကိုရောင်းချဖို့၊ Register လုပ်ရပါမယ်။တစ်နှစ်မှာ Google’s Android $25 နဲ့ Apple app store အတွက် နှစ်စဉ် $99ပေးဆောင်ရပါတယ်။ သင့်မှာ Formed ရှိပြီဆိုရင် Register လုပ်ဖို့ ကိုယ်ပိုင် (သို့မဟုတ်) Company အနေနဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ App ကို Downloads လုပ်ဖို့အတွက် အချက်အလက်တွေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးထားပြီး အသုံးပြုသူတွေကို ပိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ Free နှင့် Paid Version နှစ်မျိုးလုံးပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့App ရဲ့ အဓိကကျပြီး အများနဲ့ မတူ၊ ထူးခြားတဲ့အချက်တွေကို သုံးစွဲသူတွေ အလွယ်တကူ သိအောင် ဖော်ပြပေးထားသင့်ပါတယ်။ ပထမVersion မှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချက်အလက်များကျန်ရှိနေလျှင် နောက်Update Version မှာဖြည့်စွက်ပေးသင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ App အသုံးပြုနေသူရဲ့ Feedback တွေကို ပြန်လည်ကြည့်ခြင်းက သင်ပြန်ပြင်ဆင်သင့်တဲ့အချက်တွေနဲ့ လူအသုံးများအောင် ထည့်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို သိစေနိုင်တဲ့အတွက် သုံးစွဲသူတွေရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာအရေးပါလွန်းသောအချက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။သင် App တစ်ခုတည်ဆောက်လိုလျှင် ဒီအချက်အလက်တွေဟာ Customerနှင့် သင့် ကြားက စိန်ခေါ်မှုတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။